'Masaajidkii wuxuu noqday bad waa in aad dabbaal ku tegtaa' - Somali
'Masaajidkii wuxuu noqday bad waa in aad dabbaal ku tegtaa'
"Waa cunsurinimo in Faransiiska uu xilligan mamnuuco indhashareerka"
Posted at 13:24 13 Maajo 202013:24 13 Maajo 2020
Misaajid ku yaalla xaafad ku taalla magaalada Gaarisa ayaa waxaa la wareegay fataahado ka dhashay webiga mara magaaladaas ee Tanariver, masaajidka ayaa isku baddalay webi, biyaha waxay la tageen qalabkii masaajidka, waxaana dhacdadaas aan ka wareysannay ku-xigeenka imaamka misaajidka, Sahal Maxamuud Aadan, wuxuu u warramay weriyaha BBC-da Mucaawiye Muxumed Buraale.
Video caption: Masaajidka waxaa la wareegay daadadkaMasaajidka waxaa la wareegay daadadka
Posted at 13:09 13 Maajo 202013:09 13 Maajo 2020
Niger oo dib u fureysa masaajidda iyo kaniisadaha
Dadka ku tukanaya masaajidda waa inay kala fogaadaanImage caption: Dadka ku tukanaya masaajidda waa inay kala fogaadaan
Dowladda Niger waxay dib u fureysaa masaajidda iyo kaniisadaha ku yaalla dalkaas laga bilaabo maanta.
Goobaha cibaadada ayaa albaabada laisugu dhuftay si looga hortaggo fiditaanka cudurka Korona.
Mas'uuliyiinta waxay sheegeen in sababta loo furayo masaajidda iyo kaniisadaha ay yihiin in xaaladda ay haatan soo hagaagtay balse dadka ku cibaadeysanayo halkaas waa inay kala fogaadaan, oo ay xirtan afka iyo sanka iyo in nadaafadda ay ku dadalaan.
Waxaana haatan la buufin doonaa masaajidda iyo kaniisadaha ku yaalla Niger ka hor inta aanan dadka loo ogolaan.
Niger waxay haatan xaqiijisay 854 oo kiisaska Korona ah.
Posted at 9:47 13 Maajo 20209:47 13 Maajo 2020
Lixbaaxyo Koonfur Afrika ka baxsaday
Waxaa xarunta xanaanooyinka xayawaayanada ee dalka Koonfur Afrika ka baxsaday libaaxyo dhowr ah.
Sarkaal booliska dalkaas ka tirsan ayaa sheegay in libaaxyadan lagu arkay gobolka Limpopo maalintii Talaadada ahayd, iyada oo dadka deegaanka lagu wargeliyay inay ka foojignaadan.
Tirada libaaxyada baxsatay oo 7 ah ayaa lagu hayay xarunta xayawawaanada duur joogta ah ee Ingogo Safaris.
Galabnimadii Talaadada ayaa dhamaan libaaxyadan la soo qabtay..
Dadka u o'loleeya arrimaha xayawaanada duur joogta ah ayaa sheegay inay ka walaacsanyihiin caafimadka libaaxyada.
Ma ahan markii ugu horreysay ay libaaxyo ka baxsadeen xanaanooyinka xayawaanada ee dalka Koonfur Afrika.
Blood LionsCopyright: Blood Lions
Posted at 9:11 13 Maajo 20209:11 13 Maajo 2020
Wasiir laga baaray corona kaddib markii uu ku qufacay gudaha baarlamaanka
Wasiirka maaliyadda ee dalka Australia, Josh Frydenberg, ayaa qufac joogta ah qabtay xilli uu baarlamaanka hortiisa ka jeedinayay khudbad.
Muddo 15 daqiiqa ah ayuu masuulka si joogta ah u qufacayay, taasi oo sababtay in siyaasiyiintii halkaasi ku sugnaa aysan maqal codkiisa.
Qosol iyo xiisad ayey ka dhex abuurtay gudaha aqalka baarlamaanka, iyada oo uu wasiirka agtiisa fadhiyey ra’iisal wasaare Scott Morrison.
Josh Frydenberg, waxa laga baaray cudurka coronavirus balse natiijada baaritaanka ayaa lagu sheegay in wasiirka uusan qaban cudurkan.
Posted at 8:20 13 Maajo 20208:20 13 Maajo 2020
"Waa cunsurinimo in Faransiiska uu mamnuuco indhashareerka dadkana uu ku qasbo daboolashada afka iyo sanka"
Qoraal lagu daabacay wargays ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa ka hadlay isdhaafsiga u dhexeeya sharciyada uu Faransiiska dadku ugu qasbayo inay afka iyo sanka dabuushan ugana mamnuucaya xirashada indhashareerka..
Maqaalkan oo ay qortay Maryam Khan, ayey kaga hadashay indhashareerka iyo dabuulashada sanka iyo afka xilliga corona, waxayna tusaale u soo qaadatay dalka Faransiiska oo horay u mamnuucay xirashada indhashareer.
Maryan ayaa sheegtay inay aaminsantahay mamnuucidda indhashareerka iyo dhaqangelinta xirashada afka iyo sankaba ay muujinayso cunsurinimo iyo Islaam nacayb.
Dad ka badan 26,000 oo qof ayaa fayraska Corona u dhimata, Faransiiska wuxuu soo rogay dhaqangelinta daboolidda afka iyo sanka si looga hortago faafidda cudurkan balse waxay taasi horseeday in laga hadlo sharciyadii horay loogu soo rogay dadka lagada tira badanyahay.
“Haweenka Muslimiinta waxaa loo diiday xorriyadda ay ku xirtaan waxwalba oo ay doonayaan, maahan o’olole ka dhan ah diiditaanka waxa ay rabaan inay xirtaan balse iskudayada lagu carqaladaynayo waxa ay aaminsanyihiin ayaa ah waxa aan ka soo horjeedo.” Ayey tiri.
Posted at 6:56 13 Maajo 20206:56 13 Maajo 2020
Shirkadda Twitter ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaheeda ay marwalba guryahooda ka shaqayn karaan, haddii ay u baahdaan.
Go’aankan ayaa imaanaya kaddib markii ay shirkadda sheegtay in xilligii ay shaqaalaheeda guryaha ka howlgalaayeen ay u cadaatay suurtagalnimada ah in guryaha xilli walba laga shaqayn karo.
Balse waxa ay sidoo kale sheegtay in shaqaalaha ay marwalba “haddii ay doonan” ku soo noqon karaan xafiiska.
Horaantii bishaan Google iyo Facebook ayaa sheegay in shaqaalahooda ay guryaha ka shaqayn doonan ilaa dhamaadka sanadkan.
“Bilihii la soo dhaafay waxa aan ogaanay in guryaha si fiican looga shaqayn karo. Marka haddii ay shaqaalaheenna ay ku jiraan xaalad u sahlayso inay guryaha ka shaqeeyan waxaan doonaynaa inaan sidaas ku sii wadno,” Ayey tiri shirkadda Twitter.
Hadalkan ka soo yeeray shirkadda Twitter ayey qaar ka mid ah khubarada dhanka tiknolojiyadda ku sheegeen “bilaw cusub .“
Shirkaddan oo uu saldhigeeda yahay magaalada San Francisco ayaa waxa ka howlgala shaqaala gaaraya 4,000 oo qof.
Posted at 6:55 13 Maajo 20206:55 13 Maajo 2020